आजको राशिफल २०७८ साल भाद्र २१ गते सोमबारGandaki Press
वि.सं. २०७८ साल भाद्र २१ गते सोमबार, तदनुसार ई.सं. २०२१ सेप्टेम्बर ६ तारिख, राक्षसनाम संवत्सर, श्रीसूर्यदक्षिणायन, वर्षाऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्रकृष्णपक्षको चतुर्दशी तिथि विहान ६:५६ बजेसम्म, त्यसपछि औंशी रहनेछ ।
मेष : नयाँ अवसरहरु जुट्ने छन् । पारिवारिक सरसहयोगले कार्य गर्न सहज हुनेछ । शैक्षिक गतिविधिमा उत्कृष्ट नतिजा आउँदा मन खुसी रहनेछ । आकस्मिक लाभ हुनेछ ।सकारात्मक सोच विचार रहनेछ ।
वृष : मानसिक चिन्ता, पीरले सताउनेछ । बन्धुवान्धवसँग बोलिकै कराण सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । आर्थिक पक्ष कमजोर बन्नेछ । जिम्मा लिएका कार्यलाई समयमै पूर्ण गर्न नसक्दा भनाइ खानु पर्नेछ ।
मिथुन : मिहिनेत अनुसारको प्रतिफल मिल्दा खुसी लाग्नेछ । काम गर्ने जोश जाँगर थपिनेछ । मनमिल्ने व्यक्तिसँगको रमाइलो भ्रमण हुनेछ । सहमति र सहकार्यको वातावरणले गर्दा सहज तवरले कार्य बन्ने छन् ।
कर्कट : धार्मिक एवं सामाजिक कार्यबाट उच्च सम्मान मिल्नेछ । अचल वस्तुमा गरेको लगानिले पछि ठूलो फाइदा दिलाउने छ । आर्थिक पक्ष बलियो नै रहनेछ । अल्छि गर्ने वानीले पछि परिनेछ, जागरुक रहनु होला ।
सिंह : ठूला व्यक्तिसँग संगत रहनेछ । छोटो रमाइलो यात्राको अवसर मिल्नेछ । बोलि विक्ने समय रहेको छ । सान्दर्भिक कार्यको शुरुवाति गरिनेछ । इमान्दारीताको कदर हुनेछ । श्रृंगारिक कार्यमा मन जानेछ ।
कन्या : स्वास्थ्य कमजोर बन्नेछ । अनावश्यक कार्यमा खर्चभार बढ्नेछ । पढाइलेखाइमा भन्दा बाहिरी कुरामा मन जानेछ । दैनिक कामकाजमा पनि समस्या सृजना हुनेछ । हिनताबोधले गर्दा कार्य गर्न मन लाग्ने छैन ।
तुला : नयाँ कार्य योजनाहरु रचिने छन् । मया–प्रेमको बन्धन झन् कसिलो बन्नेछ । नयाँ नयाँ वस्तुको उपयोग गर्न पाइनेछ । आर्थिक आम्दानीमा बढोत्तरी हुनेछ । गुमेको धन हात पर्दा प्रसन्नता बढ्नेछ ।
बृश्चिक : घरायसी समस्या हल हुनेछ । नयाँ सिप सिक्ने अवसर मिल्नेछ । विशिष्ट व्यक्तिसँग सहकार्य गर्न पाइनेछ । काम अनुसारको नाम, दाम मिल्नेछ । कार्य क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पाइनेछ ।
धनु : बल, विद्या, नाम, दाम मिल्ने समय रहेको छ । अध्ययनमा चासो बढ्नेछ । धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ । सहयोगीहरुको साथले अपूरा कार्यलाई अघि बढाउन सकिनेछ । समग्रमा समय सुधारोन्मुख रहनेछ ।
मकर : अरुको नियम, नियन्त्रणमा बस्न सकिने छैन । नयाँ कार्यको थालनि गर्दा बाधा अड्चनहरु देखा पर्ने छन् । अरुले गरेको गल्तिको आरोप तपाईँलाई आउन सक्छ, सतर्क रहनु होला । दैनिक कार्यमा नै व्यस्थ रहनुहोला ।
कुम्भ : हर्षको खबर मिल्नेछ । प्रेम प्रसंग चल्नेछ । नेतृत्व गणसँग निकटता रहनेछ । लामो समय पछि मित्र मिलन हुनेछ । थालेका अधिकांश कार्य पूरा हुँदा मन हर्षित बन्नेछ । मानसिक शान्तिको अनुभूति हुनेछ ।
मीन : व्यवसायबाट सोचे अनुरुप लाभ मिल्दा खुसीयाली छाउनेछ । स्थान, मान प्रप्तिको योग बनेको छ । पूर्व तयारीका साथ लाग्दा धेरै कार्यहरु बन्नेछन् । वैदेशिक क्षेत्रका अपूरा कार्यलाई पहल गर्दा पूर्ण गर्न सकिनेछ ।